Joojinta joojinta sigaarka: sababta haweenku ugu guulaystaan ​​in ka yar ragga? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • Caadooyinka wanaagsan • DADKA & LIFESTYLE • daryeelka Joojinta joojinta sigaarka: sababta haweenku ugu guulaystaan ​​in ka yar ragga?
Joojinta joojinta sigaarka: sababta haweenku ugu guulaystaan ​​in ka yar ragga?
Eliseo Emma Kamgang 5 March 2019
Joojinta sigaarka mararka qaar waa caqabad adag in la gaaro maaddaama qabatimiddu ay leedahay saameyn awood leh.
Ka horjoogsiga joojinta sigaarka, haweenka iyo ragga ma laha fursado isku mid ah. Sababaha:
Machadka Qaran ee Xad-gudubka Daroogada, oo Maraykan ah, ayaa qiyaasaya in haweenku leeyihiin 31% fursad yar oo ay si guul ah uga tagi lahaayeen sigaar cabista ragga.
daraasadda waxaa lagu qabtay 177 dadka sigaar cabba kuwaas oo cilmi-baarayaashu muujiyeen sawirro taxane ah laba toddobaad.
Dumarku waxay leeyihiin diiqad badan
Falanqaynta saameynta dadka sigaarka cabba iyo sigaar cabbayaasha ayaa sawiradan muujinaya Sigaar-cabbayaashu waxay leeyihiin diiqad badan, Dareeno badan oo xun iyo waxay ubaahan tahay in sigaar lagu sigaar weyn ka dib markii daawashada sawir nacas ah ragga.
Xaqiiqdii, dumarku waxay sigaarka cabbaan marka ay ka baqayaan ragga iyo inay leeyihiin 31% fursad yar ee ku guuleysiga joojinta sigaarka, Sidoo kale waxay yareynayaan nicotine bedelka.
Sigaar sigaar ah ma sigaar cabbin maalin
Si Dumarku waxay sigaar cabaan wax badan oo ka jawaab celiya diiqadaSi kastaba ha noqotee, ma sigaar cabbin inta ka badan maalinta ragga. Si fudud, cadaadiska ayaa ka dhigaya inay sigaar cabbaan hore.
Cameroon: Diblooma caalami ah ee qalliinka endoscopic ee gynecology ee ugu dhakhsaha badan ee laga bixiyo Jaamacadda Yaoundé I